बच्चाको स्वस्थ विकास चाहनुहुन्छ? नभुल्नुस यी पाँच पोषकतत्व - हेटौंडा टुडे
बच्चाको स्वस्थ विकास चाहनुहुन्छ? नभुल्नुस यी पाँच पोषकतत्व
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १७:०१
हेटौंडा/अभिभावक बच्चालाई के खुवाउने र कसरी हुर्काउनु भनेर दुविधामा हुन्छन्। स्वस्थ रहन बाल्यावस्थामा केही पोषकतत्व अपरिहार्य हुन्छन् । बच्चाको सन्तुलित वृद्धि र विकासका लागि अत्यावश्यक ५ पोषकतत्वबारे जानिराखौँ:
भिटामिन ‘ए’ ले बच्चाको स्वस्थ विकासलाई सघाउँछ। अनि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। बच्चाको खानामा भिटामिन एको सुनिश्चितता गर्न पहेँलो तथा सुन्तला रङका भेजिटेवल्स, जस्तैः जागर, बेलपेपर मिसाउन सकिन्छ। साथै, दूध, अण्डा र चिजमा पनि भिटामिन ए पाइन्छ।
भिटामिन बी२, बी३, बी६ र बी१२ ले शरीरमा मेटाबोलिजम बढाउन शक्तिप्रदान गर्न, नर्भ सिस्टम राम्रो राख्न र समग्र बालविकासमा सघाउँछ । बच्चामा भिटामिन बीको पर्याप्तताका लागि खानामा मासु, माछा, नट्स, अण्डा र दूध नछुटाउनुहोस् ।
स्वस्थ हड्डीका लागि क्याल्सियम अपरिहार्य छ। दूधजन्य पदार्थ, दूध, दही, चिज र हरिया पात भएका भेजिटेबल क्याल्सियमका राम्रा स्रोत हुन्।
आइरनले मांसपेशी निर्माणमा सघाउँछ । साथै, रातो रक्तकोषिका स्वस्थ राख्न आइरन आवश्यक हुन्छ । खानामा आइरनको सुनिश्चितता गर्न रातो मासु, बिन, पातवाला तरकारीलगायत मिलाउनुहोस् ।
बच्चाको हाड, मांसपेशी, छाला तथा रगत निर्माणमा प्रोटिनले सघाउँछ । मासु, अण्डा प्रोटिनका मुख्य स्रोत हुन्।